Kungakusiza ukugcina imoto endala | Isolezwe
Kungakusiza ukugcina imoto endala
ezezimoto / 18 February 2018, 11:44am / STHEMBISO SHANGASE
UKUTHENGA imoto entsha bese uyayigcina ngisho usuqedile ukuyikhokhela kunobuhle nobubi bakhona
LWASHO lwangisuka lolo fufunyane lwami oluthi mangihlokoloze leyo mpahla ngicele bonke abafundi bale ngosi ukuthi bajeqeze izibuko zezinqola zabo baqinisekise ukuphepha maqede balandele lo myalelo.
Lo myalelo uqondile uthi sonke masishaye ama hazard siqinisekise ukuthi sichezuka ngokwanele emgwaqweni ukuze izimoto ezisaqhubeka nohambo zingaphazamiseki nakancane.
Isithunywa sami sithi mangizame ukuphendula umbuzo engihlala ngiwuthola kubantu abaningi abalandela le ngosi.
Lo mbuzo uthi kungumqondo oncomekayo yini ukukhokhela imoto uze uyiqede bese uyayigcina?
Ngizozama ukuwuphendula ngokuthi ngiveze ububi nobuhle maqede ngibeke umbono wale ngosi. Sekuyoba kuwena-ke ukuzikhethela.
Izimoto eziningi kule mihla sezifika ne-warranty yeminyaka emithathu kuya kwemihlanu noma amakhilomitha angu-100 000 kuya ku-150 000. Uma bethi bakunika lawa makhilomitha neminyaka bavamise ukuthi bacacise ukuthi okufika kuqala yikhona okuqeda i-warranty.
Le warranty ivamise ukugada izinsimbi ezinkulu njengenjini, gearbox no-diff. Konke lokhu okunye okungena esigabeni sezinto ezidlekayo akufakwa phansi kwalolu hla kodwa kona kugarantwa ngesikhathi esincane. Kuncika nasekutheni kugcine kunakekelwe kushintshwe wumuntu ogunyaziwe noma ovunyiwe yini abakhi bemoto. Kulabo abangaphuthelwa yile ngosi bazokhumbula ukuthi ngonyaka odlule sike sayixoxa kabanzi indaba ye-warranty.
Ake sibheke ingozi yokugcina imoto emuva kokuqeda ukuyikhokhela.
Yize kungancikile ekuqedeni ukukhokha ngqo kodwa kuvamisile ukuqondana ukuthi i-warranty iphele ngasekugugeni kwemoto lapho isizokudinga vele ukukhandwa. Angithi uzokhumbula ukuthi imvamisa imoto ikhokhelwa iminyaka ephakathi kwemithathu kuya kwemihlanu. I-warranty ifana nokuyisevisa, iyaphela ngokuhamba kwesikhathi ngisho imoto ibipakiwe. Angithi zonke izimoto kufanele zithole isevisi kanye ngonyaka noma ngabe ibipakiwe ingahambi kodwa-ke uma ihamba kubhekwa amakhilomitha. Ezinye ziseviswa emuva kwamakhilomitha angu-10 000 ezinye 15 000 kanti zikhona nezize zibonane nesevisi emuva kwamakhilomitha angu-20 000.
Akujwayelekile ukuthi imoto ibe nohlelo lwesevisi lwakubo kwayo kuze kube uyaqeda ukuyikhokhela. Kodwa lokho sekungakudla ephaketheni ngaphandle uma uyithenge ngokheshi iyintsha. Isingafa noma yinini ikufune imali eshisiwe.
Ubuhle bokuyigcina ukuthi awube usakhokha imali eshisiwe nyanga zonke, usala nemoto ethi wena ngisho kungathiwa awunamali awuhlaleli ovalweni lokuthi izodliwa. Uma imoto sewuyiqedile ukuyikhokhela usuke sewungayidayisa uthole imali esile ngayo kodwa kuncika ekuthini wena ubuyiphethe kanjani.
Iqhinga elingakusiza wukuthi uyibekele imali eceleni. Ake sithi ubuyikhokhela * -R5 000 ngenyanga bese kuba umshwalense kaR1 200. Qhubeka nomshwalense kodwa bese uthatha ingxenye yemali obuyikhokha ebhange uyibeke eceleni ukuze uma ifa uthathe kuyo uyokhanda. Imoto ebizayo kungakuhle ukuthi uhlale uyigade ngemali engekho ngaphansi kuka-R20 000 ngoba uma ifa injini kubhoboka iphakethe. Kodwa uma kwenzeka ifa, ungayikhandi komakhenikha basehlathini ngoba nalokho kuyayenza ukuthi ikuthwalise kanzima ikuhluphe. Umbono wama hazard uthi kuhle ukuyigcina bese ucupha ngohlelo lokuyihlinzeka ngezidingo zayo ngokunjalo nesevisi, ungalinge uyeqe ngoba ngokuhamba kweminyaka iya ngokuya izwela masinya futhi isondela ekukhathaleni kwezinsimbi zayo. Kubalulekile ukuthi uhlale unemoto engakweleti ekhaya ngoba iyihawu lakho uma isimo kwenzeka siphuma endleleni kodwa nayo qhubeka uyithathele umshwalense.
Okunye ongakwenza wukuyithathela i-warranty eqhutshiwe ezogada izinsimbi ezinkulu okuyizona ezimba eqolo uma ikufela. Lokho kubalulekile noma uqedile ukuyikhokhela noma awuqedile. Kodwa uma ufuna ukuthula nokunciphisa inkathazo, thenga imoto entsha njalo eminyakeni emihlanu lapho uzohlala ukweleta kodwa uhambe ngothulamsindo.
Hhayi-ke masiwabeke lana ama hazard ethu akuleli sonto sethembe isasiphethe kahle inyanga yothando ngokunjalo nezimoto zethu sizikhombisa impatho nothando. Masiqhubeke nokushayela ngokubuswa yiyo yonke imithetho yezokushayela ebusa leli lizwe lethu ukuze sihlangane sisawuphonsa umbalane nangesonto elizayo kuyo le nkundla.
Uma uthanda siyiqhube le ndaba ngena ekhasini lethu Igeldlela lami with Sthembiso Shangase kwiFacebook. Kungenjalo yenza njengoba benza abanye, yimi owenu nali ikheli ngezansi [email protected]